အသကျတှကွေီးပီး အိုမငျးလာခဲ့ရငျ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားသငျ့သလဲ…… – Nyi Ma Lay
အသကျတှကွေီးပီး အိုမငျးလာခဲ့ရငျ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားသငျ့သလဲ……
`အိုလာရငျ ဘာတှပွေငျဆငျထားရမလဲ ? ? ?
၁ ။ အိုဖျေါ ( လငျ မယား အို )
၂ ။ အို သိုကျ ( နအေိမျ )
၃ ။ အို စာ ( ငှကွေေး )
၄ ။ အို ရေး ( ကနျြးမာရေး )
၅ ။ အို စိတျ ( စိတျနေ စိတျထား )
ကြှနျတျောတို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတှကွေီးကွီးပါ။ ခုမအိုသေးပမေဲ့ ဖတျထားရငျ ကိုယျ့အတှကျ ကာကှယျဖို့ပွငျဆငျခြိနျရသလို၊ ကိုယျ့ မိဘတှအေတှကျ ဆနျးစဈဆငျခွငျလို့ ရနိုငျပါတယျ။ အကွံလညျးပေးလို့ရတာပေါ့၊
အိုလာရငျ ဘာတှပွေငျဆငျထားသငျ့သလဲ၊ ဘာသာရေး ရှုထောငျ့ကနမေဟုတျပဲ လကျတှေ့ ဘဝရှုထောငျ့ကနေ ဆှေးနှေးကွညျ့ရအောငျ…. ။
၁။ အိုဖျေါ : လငျအိုမယားအို မတ်ေတာကောငျးမှနျနဖေို့လိုပါတယျ။ အရငျတုနျးက ခဈြခဲ့ကွပမေဲ့ အသကျကွီးလာတော့ တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့မရတာမြိုးမဖွဈသငျ့ဘူး။ ယော့ကျြားက သားဘကျ၊ မိနျးမက သမီးဘကျ ပိုရပျတညျတာမြိုး မဖွဈရဘူး။
ငယျရှယျတုနျးက လငျမယားဆိုပမေဲ့ အိုလာရငျ အဖျေါ မှနျဖွဈဖို့၊ ရပျတညျခကျြတူညီဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ငယျငယျတု နျးကတော့ ယောကျြားက ပိုကျဆံရှာ၊ ယောကျြား အငျအားကောငျးတော့ အပွငျမှာ ပှခေငျြတိုငျးပှေ၊ သောကျစားခငျြတိုငျး သောကျစား၊ အိမျကမိနျးမကို ခိုငျးဖတျလိုသဘောထားပွီး အျောလိုကျငေါကျလိုကျ လုပျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဟာ၊ အိမျထောငျသကျ အနှဈ ( ၂၀ ) နောကျပိုငျးမှာ သားသမီးတှေ ကွီးလာရငျ သားသမီးမြားက အမဘေကျက ရပျတညျတာ ခပျမြားမြားဆိုတော့ အရငျက ခံခဲ့သမြှ ပွနျဆပျရတတျတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျအသကျကွီးတဲ့အခါ ကိုယျ့မိနျးမက ကိုယျ့ကို တကယျကောငျးစခေငျြရငျ ကိုယျက သူတို့အပျေါ အရငျကောငျးထားရတယျ။
၂။ အိုသိုကျ : နဖေို့ထိုငျဖို့ အိမျတဈလုံး ရှိထားဖို့လိုပါတယျ။ အဲဒီအိမျကိုလညျး မသမေခငျြး ထိနျးထားဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျက မကွာမီေ သတော့မယျဆိုပွီး စောစော စီးစီးထုခှဲပွီး အမှေ ခှဲမပေးလိုကျနဲ့၊ကိုယျနဖေို့ပြောကျသှားနိုငျတယျ။
မပြောကျသှားတာတောငျမှ သားသမီးမကျြနှာ ( သို့ ) ခြှေးမနဲ့ သမကျမကျြနှာကွညျ့ပွီး အသကျရှငျရတာ မတနျဘူး။
၃။ အိုစာ : အိုစာမငျးစာကို ဆိုလိုပါတယျ။ ရှဖွေဈဖွဈ ၊ ပိုကျဆံဖွဈဖွဈ ကိုယျ့အတှကျကိုယျခနျြထားရတယျ။ သားသမီး စီးပှားရေးလုပျဖို့ အရငျးအနှီး မရှိဘူးဆိုပွီး အကုနျထုတျမပေးလိုကျနဲ့၊ အားလုံးပေးလိုကျရငျ အိမျကဆငျးသှားရနိုငျတယျ။
အခဈြရဲ့သဘာဝဟာ နောငျမြိုးဆကျကိုပဲ ဆငျ့ပှားပါတယျ။ သားသမီးကို ခဈြတယျဆိုတာ သတ်တဝါတိုငျးရဲ့ မှေးရာပါ သဘာဝွဖဈပါတယျ။ မိဘကိုရိုသတေယျဆိုတာ ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့ သှနျသငျယူရတယျ။မှေးမွူ ယူရပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ မသခြောတတျဘူး။
မိဘမြားဟာ သားသမီး ( ၁၀ ) ယောကျကို ‘အပွုံးမပကျြ’ ကြှေးမှေးနိုငျပမေဲ့၊ သားသမီး (၁၀ ) ယောကျဟာ မိဘနှဈပါးကို ‘စူပုတျလောကျအောငျ’ ကြှေးမှေးရတယျ ဆိုတဲ့ စကားပုံတဈခုကို ကွားဖူးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မအိုသေးခငျမှာ ကိုယျ့အတှကျ အိုစာခနျြပါ။
၄။ အိုရေး : အိုတဲ့အခါမှာ ရှိတဲ့ကနျြးမာရေးကို အတိုကောကျရေးလိုကျတာပါ။ အိုလာရငျ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ကိုယျဂရုစိုကျရတယျ။ မနကျတိုငျးလမျးလြှောကျတာမြိုး အဖှဲ့လိုကျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာမြိုး ပါဝငျသငျ့ပါတယျ။
ကောငျးကောငျးမလြှောကျနိုငျရငျလညျး လှုပျရှားနိုငျသမြှ အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျလကျလှုပျရှားပေးသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျခွငျးဟာ ကိုယျ့အတှကျသာမဟုတျ သားသမီးမြားအတှကျပါ လာဘျတဈပါးဖွဈပါတယျ။
သူတို့တှေ ကိုယျ့အတှကျ သိပျမပူရရငျ သူတို့အလုပျကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ လုပျလို့ရတာပေါ့။
၅။ အိုစိတျ : အိုလာရငျ စိတျနစေိတျထား မှနျမှနျကနျကနျ ထားတတျဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျအသုံးမကတြော့ဘူးဆိုပွီး မသိမျငယျသငျ့ပါဘူး။ သခွေငျးတရားကို တှေးတောပွီး ကွောကျမနသေငျ့ပါဘူး။ မမမေ့လြော့ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။
တဈရကျအသကျရှငျရငျ တဈရကျအမွတျပဲ၊ တနျအောငျအသကျရှငျရမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးမှေးမွူ ရပါမယျ။ ကနျြးမာရေးအဆငျပွရေငျ အလှူပှဲတှေ၊ ကူညီမူ ၊ လှုပျရှားမူတှေ ၊ ဘာသာရေးပှဲတှေ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ပါဝငျလှုပျရှားသငျ့ပါတယျ။
စိတျဓါတျရှငျလနျးပွီး သနျ့သနျ့ ပွနျ့ပွနျ့ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။ အသကျကွီးသူမြားအားလုံး ကနျြးမာခမျြးမွေ့ နိုငျကွပါစေ 🙏🙏🙏Credit to Thandar Han .
`အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ ? ? ?
၁ ။ အိုဖေါ် ( လင် မယား အို )
၂ ။ အို သိုက် ( နေအိမ် )
၃ ။ အို စာ ( ငွေကြေး )
၄ ။ အို ရေး ( ကျန်းမာရေး )
၅ ။ အို စိတ် ( စိတ်နေ စိတ်ထား )
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတွေကြီးကြီးပါ။ ခုမအိုသေးပေမဲ့ ဖတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက် ကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ချိန်ရသလို၊ ကိုယ့် မိဘတွေအတွက် ဆန်းစစ်ဆင်ခြင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အကြံလည်းပေးလို့ရတာပေါ့၊
အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ၊ ဘာသာရေး ရှုထောင့်ကနေမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ ဘဝရှုထောင့်ကနေ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်…. ။
၁။ အိုဖေါ် : လင်အိုမယားအို မေတ္တာကောင်းမွန်နေဖို့လိုပါတယ်။ အရင်တုန်းက ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်မရတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ ယော့က်ျားက သားဘက်၊ မိန်းမက သမီးဘက် ပိုရပ်တည်တာမျိုး မဖြစ်ရဘူး။
ငယ်ရွယ်တုန်းက လင်မယားဆိုပေမဲ့ အိုလာရင် အဖေါ် မွန်ဖြစ်ဖို့၊ ရပ်တည်ချက်တူညီဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ငယ်ငယ်တု န်းကတော့ ယောက်ျားက ပိုက်ဆံရှာ၊ ယောက်ျား အင်အားကောင်းတော့ အပြင်မှာ ပွေချင်တိုင်းပွေ၊ သောက်စားချင်တိုင်း သောက်စား၊ အိမ်ကမိန်းမကို ခိုင်းဖတ်လိုသဘောထားပြီး အော်လိုက်ငေါက်လိုက် လုပ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဟာ၊ အိမ်ထောင်သက် အနှစ် ( ၂၀ ) နောက်ပိုင်းမှာ သားသမီးတွေ ကြီးလာရင် သားသမီးများက အမေဘက်က ရပ်တည်တာ ခပ်များများဆိုတော့ အရင်က ခံခဲ့သမျှ ပြန်ဆပ်ရတတ်တယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်အသက်ကြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်မိန်းမက ကိုယ့်ကို တကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ကိုယ်က သူတို့အပေါ် အရင်ကောင်းထားရတယ်။
၂။ အိုသိုက် : နေဖို့ထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်လုံး ရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ကိုလည်း မသေမချင်း ထိန်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က မကြာမီေ သတော့မယ်ဆိုပြီး စောစော စီးစီးထုခွဲပြီး အမွေ ခွဲမပေးလိုက်နဲ့၊ကိုယ်နေဖို့ပျောက်သွားနိုင်တယ်။
မပျောက်သွားတာတောင်မှ သားသမီးမျက်နှာ ( သို့ ) ချွေးမနဲ့ သမက်မျက်နှာကြည့်ပြီး အသက်ရှင်ရတာ မတန်ဘူး။
၃။ အိုစာ : အိုစာမင်းစာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ရွှေဖြစ်ဖြစ် ၊ ပိုက်ဆံဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ချန်ထားရတယ်။ သားသမီး စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အရင်းအနှီး မရှိဘူးဆိုပြီး အကုန်ထုတ်မပေးလိုက်နဲ့၊ အားလုံးပေးလိုက်ရင် အိမ်ကဆင်းသွားရနိုင်တယ်။
အချစ်ရဲ့သဘာဝဟာ နောင်မျိုးဆက်ကိုပဲ ဆင့်ပွားပါတယ်။ သားသမီးကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သတ္တဝါတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ သဘာဝြဖစ်ပါတယ်။ မိဘကိုရိုသေတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့ သွန်သင်ယူရတယ်။မွေးမြူ ယူရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် မသေချာတတ်ဘူး။
မိဘများဟာ သားသမီး ( ၁၀ ) ယောက်ကို ‘အပြုံးမပျက်’ ကျွေးမွေးနိုင်ပေမဲ့၊ သားသမီး (၁၀ ) ယောက်ဟာ မိဘနှစ်ပါးကို ‘စူပုတ်လောက်အောင်’ ကျွေးမွေးရတယ် ဆိုတဲ့ စကားပုံတစ်ခုကို ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မအိုသေးခင်မှာ ကိုယ့်အတွက် အိုစာချန်ပါ။
၄။ အိုရေး : အိုတဲ့အခါမှာ ရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကို အတိုကောက်ရေးလိုက်တာပါ။ အိုလာရင် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်ဂရုစိုက်ရတယ်။ မနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်တာမျိုး အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုး ပါဝင်သင့်ပါတယ်။
ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ရင်လည်း လှုပ်ရှားနိုင်သမျှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်သာမဟုတ် သားသမီးများအတွက်ပါ လာဘ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေ ကိုယ့်အတွက် သိပ်မပူရရင် သူတို့အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်လို့ရတာပေါ့။
၅။ အိုစိတ် : အိုလာရင် စိတ်နေစိတ်ထား မှန်မှန်ကန်ကန် ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးမကျတော့ဘူးဆိုပြီး မသိမ်ငယ်သင့်ပါဘူး။ သေခြင်းတရားကို တွေးတောပြီး ကြောက်မနေသင့်ပါဘူး။ မမေ့မလျော့ နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
တစ်ရက်အသက်ရှင်ရင် တစ်ရက်အမြတ်ပဲ၊ တန်အောင်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမွေးမြူ ရပါမယ်။ ကျန်းမာရေးအဆင်ပြေရင် အလှူပွဲတွေ၊ ကူညီမူ ၊ လှုပ်ရှားမူတွေ ၊ ဘာသာရေးပွဲတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားသင့်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ရွှင်လန်းပြီး သန့်သန့် ပြန့်ပြန့် နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းမြေ့ နိုင်ကြပါစေ 🙏🙏🙏Credit to Thandar Han .
Previous post ကားတဈစီးမှာ အရေးပါလှတဲ့ အသကျကယျလအေိတျနှငျ့ လုံခွုံရေးခါးပတျ တှေ ဘယျလို အလုပျလုပျသလဲ….
Next post အသားမညျး သူတှေ အသုံးပွုလို့ မရတဲ့ အလိုလြှောကျ ဆပျပွာထုတျစကျ